SEO: ရှောင်ကွင်းရန် Link ချိတ်ဆက်မှု ၁၀ ​​ခု Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2009 တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 21, 2015 Adam အသေးစား
5″ /> ဂူးဂဲလ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်မသင့်ဆိုတာ၏ရွှေစံနှုန်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆက်၍ ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမပြောင်းလဲဘဲကျန်နေခဲ့သည်…သက်ဆိုင်သည် တရားဝင်, authoritative က်ဘ်ဆိုက်များမှ backlinks။ စာမျက်နှာတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုနှင့်များစွာသောအကြောင်းအရာများစွာသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ သို့သော်အရည်အသွေးကျောထောက်နောက်ခံများသည်၎င်း၏ရာထူးကိုတက်လိမ့်မည်။
backlink များသည်လူသိများသောကုန်ကြမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကတည်းကများစွာသော link link scam များနှင့် service များသည် web ပေါ်တွင်ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းတာကိုမဆွဲဆောင်ပါနဲ့ သင်သည်သင်၏အဆင့်ကိုတိုးတက်စေရုံသာမကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အညွှန်းကိန်းများမှကျဆင်းခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ခံရလိမ့်မည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်မညွှန်ပြလိုသည့်လင့်များအမျိုးအစားအချို့ကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤစာရင်းသည်တန်ဖိုးနှင့်ဆက်နွှယ်သောတန်ဖိုးများကိုမကျော်လွှားနိုင်သောလင့်ခ်များနှင့်ရောထွေးခြင်းမဟုတ်ပါ rel = "nofollow" attribute က။
သို့မဝယ်ပါနဲ့ link စိုက်ခင်းများ။ သင်ဟာတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၉.၉၅ အတွက်လင့်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကိုရယူပါ။ ဒီအစီအစဉ်များမှဝေးနေပါ။
ဝေးလူကြိုက်များနေပါ link ပွဲစားများ text-link-ads.com သို့မဟုတ် textlinkbrokers.com လိုပဲ။ ဤပွဲစားများသည်သင့်အား Google ၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာသက်ရောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စာသားလင့်များကိုရောင်းလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုချိုးဖောက်သည် ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ.
သုံးစွဲသူများကိုလူကြိုက်များသော webmaster ဖိုရမ်များတွင်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် မြင့်မားတဲ့ pagerank လင့်များ။ ဤဆိုဒ်များသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောဒိုမိန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည် Google PageRank တန်ဖိုးများ တန်ဖိုးမရှိ၊ ထူးကဲသောပါဝင်မှုမရှိသော template websites များကိုလျင်မြန်စွာလွှင့်ပစ်နိုင်သည်။ ဤဆိုဒ်များသည် PageRank တန်ဖိုးများကိုဂူးဂဲလ်မှပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုချက်ချင်းသိမြင်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤရိုးရှင်းသောဆိုဒ်များသည်လင့်များကိုရောင်းချနေသည်ကိုဂူဂဲလ်မှဖော်ထုတ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
သင့်ရဲ့ link တွေကိုမှလာသေချာပါစေ အမေရိကန်အခြေစိုက်နှင့်ပစ်မှတ်ထားက်ဘ်ဆိုက်များ သင့်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုပစ်မှတ်စျေးကွက် US မှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်။
သင်ဖန်တီးထားသောလင့်များကိုတကယ်မလိုချင်ပါ spam software ကို။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲအများစုဟာခြေရာကိုချန်ထားပြီးဂူဂဲလ်ကိုအလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်ရန်လွယ်ကူသည်။
သင်တကယ်ကနေလင့်များမလိုချင်ကြဘူး junk ဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဤရွေ့ကားထူးခြားသောအကြောင်းအရာအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိသည်သော Affiliate က်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့သောဆိုဒ်များဖြစ်ကြသည်။
P သုံးခုနှင့်သက်ဆိုင်သော spam ဆိုဒ်များသို့လင့်ခ်များကိုမတင်ပါနှင့် (porn, ဆေးပြားနှင့်ဖဲချပ်) ။ ကာလ။
ပိုင်ရှင်သည်ထိထိရောက်ရောက်မစီမံနိုင်သည့်ဖိုရမ်သို့လင့်များတင်ရန်သွေးဆောင်ခြင်းကိုရှောင်ပါ spam များပြည့်နှက်နေသည်.
သင်၏ URL ထည့်ရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်သွေးဆောင်မှုကိုရှောင်ပါ memes link ကို။ မှတ်စုများသည်ကြီးထွားလာနေသောအချိတ်အဆက်များစာရင်းဖြစ်ပြီးပါဝင်သူများစာရင်းတွင်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် pagerank များကိုမျှဝေရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆိုဒ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းသွားသည်။
ဤရွေ့ကားသင်မလိုချင်သောလင့်ခ်အမျိုးအစားများအနက်မှဆယ်ခုသာရှိသော်လည်း၊ မဟုတ် အားလုံးပါ ၀ င်သည်။
Tags: website ရဲ့ backlinkမှတ်ချက် spamသက်တမ်းကုန်ဆုံးဒိုမိန်းလင့်များlink ပွဲစားများlink စိုက်ခင်းများmemes link ကိုspam ကို linkလင့်များလင့်များရောင်းချခြင်းစပမ်း
6:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 37
@diiannaa # #3ကိုမေးခဲ့တယ်။ သင် link တွေ ၀ ယ်နေရင် Google ကဘယ်လိုပြောနိုင်မှာလဲ။
6:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 7, 46
7:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 42
အခြားဘလော့ဂါများကလည်းသင်ဝယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီသင့်အားသင်၏ link ကိုသွားမည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စာမျက်နှာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်ဂူဂဲလ် spam အဖွဲ့မှသူတစ် ဦး ဦး မှဤအချက်အလက်များကိုရရန်လွယ်ကူသည်။ ပွဲစားများကိုချိတ်ဆက်ရန်အတွက်ငွေပေးချေရန်မလိုအပ်သည့်လင့်ခ်များတည်ဆောက်ရန်တရားဝင်နည်းလမ်းများရှိသည်။
မေလ 7, 2010 မှာ 1: 47 AM
ဂူဂဲလ်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအဆင့်နိမ့်ကျသွားစေဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေအရသင့်အထက်မှာအဆင့်ရှိတဲ့ပြိုင်ဖက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေကိုအမှန်တကယ် spammy လင့်ခ်များ ၀ ယ်ယူရန်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
မေလ 9, 2010 မှာ 12: 15 pm တွင်
, သူ Mike မင်္ဂလာပါ
spammy backlink များအတွက် domain ကို Google ကအပြစ်မပေးပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသာဖြစ်ခဲ့လျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းစွာလုံးဝသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုဒါကြောင့်ဖြစ်သည်။
2:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 58 တွင်
29:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 28
SEO ၏“ အမှောင်ဘက်” သို့၎င်း၊ spammy link ဘီးများကိုစတင်တည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆောင်းပါးလမ်းညွှန်များစသည်တို့ကို PLR အားညံ့ဖျင်းစွာတင်ပြခြင်းစသည်တို့သည်အလွန်ပင်သွေးဆောင်လျှက်ရှိသည်။ အခြားသူများလည်း၎င်းကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။ ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွေ့အကြုံက Big G ဟာနောက်ဆုံးမှာဆက်လုပ်နေပြီးဒီလင့်ခ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ BTW အလွန်ကြီးသော post ။
3:2012 pm မှာဇွန် 8, 39